Daawo: Ra’isul wasaare kheyre oo maanta soo jiitay dareenka shacabka soomaliyeed kadib markii uu booqasho ku tagay…. – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Ra’isul wasaare kheyre oo maanta soo jiitay dareenka shacabka soomaliyeed kadib markii uu booqasho ku tagay….
by Tifaftiraha K24 28th March 2017 030
Maxaadan ogeyn oo saakay ka dhacay nawaaxiga garoonka diyaaraddaha aadan cadde ee magaalada muqdisho?
Sawirro: C/wali gaas oo ka qeyb galay aas qaran oo loo sameeyay saraakiil puntland ka tirsan oo shil gaari ku nafwaayay
Xildhibaano ka digey in Afhayeenka Baarlamaanka loo doorto Xil. Cabdirashiid Xiddig -VIDEO
War hada: Ganacsade caan ah oo bartamaha suuqa bakaaraha lagu toogtay xili uu…..+Magaciisa
Dhagayso:- Taliye Mukhtaar oo Farriin u diray dhalinyaradda cusub ee kusoo biiray Booliska
Ahmed sudani 10th January 2018